﻿	Atụmatụ 7 iji wepu mmanya mmanya uhie - Ndụmọdụ Na Nnukwu Echiche!
bu teriyaki sauce dika soy sauce
ebee ka m ga-enweta salad taco
esi esi nri nri gyro
kedu ihe eji wee chili
Atụmatụ 7 iji wepu mmanya mmanya uhie
Esi Wepụ Uhie Mmanya Uhie
Kpoo ya ka ị Zọpụta ya ma ọ bụ KWES ITR IT YA!
Oh, mmanya dị ụtọ nke ukwuu na ụzọ mara mma iji gbanyụọ ogologo ụbọchị a mana ọ nwekwara ike ịkọwa ọdachi maka ebe obibi gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmanya mmanya na-acha ọbara ọbara na akwa akwa gị, uwe ma ọ bụ ihe mgbochi ị ga-achọ inye ụfọdụ n'ime ndị a nwaa!
Gụọ na maka a ole na ole Atụmatụ na ihe na-eme ma ọ bụrụ na ị na-awụsa na ihe ị hụrụ n'anya… Ma cheta, NA-anwale ule mgbe niile na mpaghara zoro ezo iji jide n'aka na ọ gaghị emebi elu.
Megharịa ND TMỌD THIS A
Oh, m ga-ekwukwa na mmanya na-acha ọcha anaghị arụ ọrụ! Nke ahụ bụ akụkọ ifo ochie ga-ahapụ gị naanị ntụpọ edo edo karịa nke odo. Ọ bụghị ihe ngwọta ... chekwaa ọcha maka iko mmanya gị!
Nnu bụ ụzọ dị mma iji wepụta mmanya uhie elu ala nke na-adịghị nwayị amịkọrọ . (Ihe ndị dị ka ákwà mgbochi, akwa akwa na kapeeti). Naanị fesaa ya (tinye obere soda soda ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa), gbanye ya ma hapụ ya ka ọ rụọ ọrụ. Tinyegharịa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
ihe itinye na cheese fondue
2. Mmiri na-ekpo ọkụ ma ọ bụ Soda Club
Ọ bụrụ na mmanya a wụsịrị ọhụrụ, mmiri ọkụ ma ọ bụ soda ga-eme ihe aghụghọ ahụ uwe kachasị .
3. Hydrogen Peroxide & Ncha
Nke a dị mma maka uwe ọcha ma ọ bụ akwa ákwà tebụl.
Gwakọta akụkụ hà hydrogen peroxide & ncha efere.
Ontogba na ntụpọ.
Blot na ikwugharị dị ka mkpa.
Ọ bụrụ na ị na-anwa ị nweta mmanya n'ime osisi na mmanya agbafuola ọhụrụ . Soro usoro atọ a:
bowtie pasta salad na feta chiiz
Kpaa ebe ahụ
Jiri amonia kpochapu ya
Polish ya na ụfọdụ arịa ụlọ ọcha
5. Mmanụ na mmanụ rere ere
Ọ bụrụ na ntụpọ dị osisi ma ọ bụghị nke ọhụrụ ma ọ bụ bụrụ okenye:
Gwakọta mmanụ linse na rottenstone iji mado.
Ghichaa mado na ntụpọ, na-aga na ntụ ọka nke nkụ.
Chere ọkara awa.
Wụsaa ntụ ọka iji tinye ihe fọdụrụ na mmanụ ọ bụla.
Dị ọcha na Polish
6. Hydrogen Peroxide na Talcum ntụ ntụ
Ihe ngwọta a na-arụ ọrụ poros countertops (dị ka granite):
Gwakọta ihe abụọ ahụ na mado
Tinye mado na ntụpọ ihe dị ka sentimita asatọ.
Hapụ ya ka ọ nọrọ otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ.
Tinyegharịa ugboro ole ọ bụla dị mkpa
7. Ime Soda ma ọ bụ Mmanya
Ihe ngwọta a na-arụ ọrụ kapeeti (ọhụụ ọhụụ naanị) .
Ghichaa ihe niile i nwere ike iji akwa nhicha akwụkwọ.
Tinye obere mmiri oyi n’elu ntụpọ ahụ gbanye ntụpọ ahụ wee hichaa ya ọzọ.
N'ikpeazụ, mee ọkwa nke soda na mmiri na-eme ka ọ dị nro.
Kwe ka tapawa kpoo ma kpochapu mmiri fọdụrụ.
Ihe ngwọta a na-arụ ọrụ kapeeti ma ọ bụ uwe .
Ikpokọta iko abụọ nke mmiri ọkụ, 1 ngaji mmanya na 1 ngaji ngaji ncha.
Iji akwa akwa, tinye ntụpọ ahụ.
Tinyegharịa ka ọ dị mkpa. Itucha na mmiri oyi ka ọkọchị.
Tinye ihe ichoro nke gi n’ime ihea n’okpuru!
Ndụmọdụ ndị ọzọ Ebe a
Isi mmalite http://spotremoval.coit.com/how-to-remove-red-wine-out-of-carpet http://www.ehow.com/info_12134272_ammonia-wood-cleaning.html http: //housekeeping.about .com / od / stainremoval / ht / Wepụ-Red-Wine-Stains-On-Kapetị.htm